Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Bahamas Summer Boating Flings ugbu a na ngwa zuru ezu
Njem njem • Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Foto dị na Bahamas Summer Boating Fling to Bimini bụ, site n'aka ekpe gaa n'aka nri, Ahmad Williams, BMOTA; Onye na -egwu NFL, DJ Swearinger; Captain Richard Treco, BMOTA na Jonathan Lord, BMOTA.
Bahamas Ministry of Tourism & Aviation's (BMOTA) Fling Boating Flings to The Bahamas zuru oke. Kwa izu ụka ọ bụla site na June 10 ruo Ọgọst 1, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ọhụrụ na ahụmịhe na-aga n'oké osimiri, na-agafe Osimiri Stream gaa Grand Bahama ma ọ bụ Bimini ka ha nwee ahụmịhe nke ndụ ha niile, site na oriri nnabata na ịkwọ ụgbọ mmiri ka ọ bụrụ ezigbo ihe omume.
Onye egwu NFL ama ama DJ Swearinger sonyere na Fling to Bimini, ndị na -akwado ụgbọ mmiri so ya.
Nke a bụ ohere na -adọrọ mmasị inyocha agwaetiti ndị ahụ n'ụzọ pụrụ iche.
Oké osimiri mepere emepe na ụfọdụ ndị ọchịagha nwere ahụmịhe jikọtara ụfọdụ anyanwụ Bahamia, ájá, na oké osimiri na -eme njem njem oke osimiri n'oké osimiri.
Ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri kacha ọhụrụ gbabara na Bimini, June 24-27, dọtara onye egwuregwu NFL ama ama Dayarlo Jamal “DJ” Swearinger Sr., onye ji obere ụgbọ mmiri rute Bimini. Ndị na-akwado akụkọ ihe mere eme NFL afọ itoolu na onye bụbu Mahadum South Carolina alumnus sonyeere n'ụgbọ mmiri ha maka njem na-eme njem, njem na-agaghị echefu echefu na kilomita 50.
Otu nke iri na asaa, nke nwere ndị ọhụrụ na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri sitere na South Carolina, Florida na Georgia, depụtara Gulf Stream na Bimini site na Bahia Mar Marina na Fort Lauderdale, n'ime ụgbọ mmiri nke nha ya sitere na 24ft ruo 33ft. Ndị nnọchi anya ụgbọ mmiri Bahamian, ndị isi Robert Brousseau nke South Carolina na Isaac Burgos nke Florida na Captain Richard Treco, onye bụbu onye njikwa na BMOTA na onye nhazi fling, onye na -eduzi ụgbọ mmiri. njem na Bahamas ihe karịrị afọ iri.
“Anyị na -ejikọ ụdị ụgbọ mmiri n'otu ụgbọ mmiri, ka ha wee lebara ibe ha anya. Anyị na -enye ha nhazi GPS ma gosi ha otu esi agụ ihe egwu, ka ha nwee ike ịnyagharịa na mmiri Bahamia n'enweghị nsogbu, "Treco kwuru.
Oké osimiri mepere emepe, ụfọdụ ndị ọchịagha nwere ahụmịhe yana ndị na -achọ ịmata ihe, ụgbọ mmiri ole na ole, jikọtara ya na anyanwụ Bahamia, ájá na oké osimiri na -eme njem njem n'oké osimiri. Kedu ihe ga -adọrọ mmasị karịa ụdị ohere a inyocha agwaetiti ndị ahụ n'ụzọ pụrụ iche?
Onye odeakwụkwọ na -adịgide adịgide na Bahamas Ministry of Tourism & Aviation, Maazị Reginald Saunders (nọ ọdụ n'ahịrị nke abụọ, n'aka nri nke abụọ) nọ n'aka ndị isi ndị isi na nso nso a na Bahia Mar Marina, iji gwa ndị na -anya ụgbọ mmiri na -esonye na ịkwọ ụgbọ mmiri na -aga Bahamas.
Otu a nọrọ na Resorts World Bimini na Bimini Big Game Club Resort & Marina, wee sonye na ọtụtụ emume na na Bimini na gburugburu ya. N'ime ha, na-enyocha ebe akụkọ ihe mere eme nke agwaetiti ahụ, na-eso ndị obodo nọ n'oge obi ụtọ na I-95 Broward Bar & Restaurant na Bimini, Mike's Conch Stand na-egwu mmiri na saịtị mgbaba ụgbọ elu a ma ama nke Bimini, SS Sapona Shipwreck na Honeymoon Harbor, ebe mmadụ na-ebighị. agwaetiti dị nso, juputara na stingrays, reefs mara mma, coral na ndụ oke osimiri dị iche iche. Ụfọdụ gara egwu egwu, nke na -egosi DJ Flo Rida, na Resorts World Bimini.
Ndebanye aha ka ghe oghe maka flings ndị fọdụrụ, mana edobere ntụpọ na mbido mbụ, nke izi ozi mbụ. Flings ahaziri ahazi bụ: July 8 -18 (ịgbatị agbatịkwuru Eleuthera) yana Bimini, Julaị 22 -25 na Julaị 29 -Ọgọst 1, 2021. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara ụgwọ ndebanye aha na ozi ndị ọzọ, biko gaa na Bahamas.com/boating. A na -atụ aro ka ndị nwere mmasị gaa nzukọ ndị isi na Bahia Mar Marina na Fort Lauderdale. A na -enwe nzukọ na Wenezde tupu fling nke ọ bụla wee malite ozugbo n'elekere 6:30 nke abalị
N'ihe karịrị agwaetiti 700 na cays na agwaetiti 16 pụrụ iche, Bahamas dị naanị kilomita 50 site n'ụsọ oké osimiri Florida, na -enye ụzọ mgbapụ dị mfe nke na -ebuga ndị njem pụọ kwa ụbọchị. Agwaetiti Bahamas nwere ịkụ azụ nke ụwa, ndakpu mmiri, ịnya ụgbọ mmiri, nnụnụ na ihe omume sitere n'okike, ọtụtụ puku kilomita nke mmiri kachasị egwu n'ụwa na oke osimiri na-eche ezinụlọ, di na nwunye na ndị njem. Chọpụta agwaetiti niile ga -enye na https://www.bahamas.com/ ma ọ bụ na Facebook, YouTube or Instagram ịhụ ihe mere Ọ ka Mma na The Bahamas.